एजेन्सी । धेरै सेलिब्रेटीहरुको सार्वजनिक तथा निजी जीवन रंगिन हुन्छ । तर, केही सेलिब्रेटीहरु सार्वजनिक रुपमा मात्रै निकै खुसी देखिन्छन् तर, व्यक्तिगत जीवनमा भने निकै कुण्ठा तथा पीडा बोकेर हिडिरहेको हावी पाउँछौं । कतिपयले त सार्वजनिक रुपमा नै आफ्ना पीडाहरु पोख्दै आएका छन् भने कतिपय सेटिब्रेटीहरु आत्महत्या गर्नसम्म पुगेका छन् । विस्तृतमा
अन्ततः शिल्पाले मागिन् डिभोर्स, छविले दिए यस्तो प्रतिक्रिया
३६ वर्षमा टेकिन् क्याटरिना
भिलेन बन्नकै लागि दाह्री–जुङ्गा पाल्दै भुवन, फिल्मको हिरो चाँही अनमोल !
ऋतिकको ‘सुपर ३०’ ले कति कमायो ?
फिल्मको लागि मोटाउँदै आलिया !
अभिनय कला त छँदैछ, सुनदरताले पनि उत्तिकै साथ दिएको छ, आलिया भट्टलाई । त्यसमा पनि अभिनेता रणवीर कपूरसँग उनको रिलेसनसीप सार्वजनिक भएपछि उनको हरेका गरिविधि बारे फ्यानहरुले चासो राख्ने नै भए ।
सृष्टि र सौगातः कति सुहाएको !
अभिनेता सौगात मल्ल र अभिनेत्री सृष्टि श्रेष्ठ फिल्म ‘पोई प–यो काले’को मुहूर्तमा कार्यक्रममा सरिक भए । सौगत र सृष्टि हात समाएर नयाँ बजारको सम्राट पार्टी प्यालेसमा भर्खरै लभ परेजस्तो तरिकाले हलभित्र छिरे । हलमा छिर्न नपाउँदै पत्रकारले क्यामेरा तेस्र्याउन थालिहाले । त्यसपछि उनीहरुको लज्जाबोध हेर्न लायकको थियो ।
आइटम गर्ल सुष्मालाई फेक आइडीले तनाब
कलाकारहरु बेला बखतमा फेक फेसबुक आइडीको मार खेपिरहेका हुन्छन् । यो पटक पनि अभिनेत्री सुष्मा कार्की आफ्ना नाममा खोलिएको एउटा फेक आइडीको मारमा परिन् ।
स्वास्तिमाको टु पिस अवतार
अभिनेत्री स्वास्तिमा खड्काले यतिखेर अष्ट्रेलियाको सिड्नीका समुद्रमा खिचेका तस्विरहरु सामाजिक सञ्जालमा पोखिरेहेकी छन् । कहिले वालुवामा त कहिले दौडेको तस्वीरहरु सार्वजनिक गरिरहेकी छन् । उनको तस्वीर अष्ट्रेलियाको समुद्री सतह पार गरेर नेपालसम्म आइपुग्दा सिने बजारमा राम्रै हल्ला बटुल्न सफल भएको छ ।
सुरक्षाको कत्रो असुरक्षा
फिल्म भन्दा पनि म्युजिक भिडियोमा जम्न थालेकी अभिनेत्री सुरक्षा पन्त प्रायः फिल्म फ्लप भइहरेका छन् । उनले अभिनय गरेको र आशा गरेको फिल्म ‘गोपी’ले नराम्ररी पछा–यो । यसपछि त उनलाई तनाव नै हुने भयो । फिल्ममा नचलेपछि धन्न म्युजिक भिडियोमा अफर आइरहेको छ ।
'कपिल आफ्नो जन्मदिनलाई त्यति महत्व दिदैनन्'
कपिलले आफ्नो जीवनमा धेरै संघर्षका दिनहरु देखेका छन् । अरुलाई हसाउन ठुलै संघर्ष गरेका उनले अन्तत करोडौँको मनमा घर बनाउन सफल भए ।
विवाह हतारहतारमा, हतारहतारमै डिभोर्स
बलिउड–बलिउडमा केही यस्ता जोडीहरु रहेका छन् जसको वैवाहिक सम्बन्ध लामो समय टिक्न सकेन । उनीहरुको सम्बन्ध जोडिदाँको उत्साह केही छिनमा नै हराएको थियो ।
कति छ काजलको सम्पत्ति ?
एजेन्सी । बलिउड अभिनेत्री कागज मुखर्जीको जन्म सन् १९७४, अगस्ट ५ मा भएको थियो । उनको पिता सोमु मुखर्जी पनि फिल्म निर्देशक तथा निर्माता रहेका थिए ।
संजय दत्तका यी १० प्रेमिकाहरु, कति चर्चामा रहे कति गुमनाम
एउटा फिल्म निर्देशन गरेबापत यति ठुलो रकम लिने गर्छन् यी बलिउड निर्देशकहरु
एजेन्सी । बलिउडमा केही यस्ता फिल्म निर्देशकहरु रहेका छन् जो अभिनेताभन्दा पनि बढी चर्चामा रहने गर्छन् ।